ADD MORE ထွက်ခွာသည်
DHL ကနေ code ကို Check
code ကို EMS Check
THB အမေရိကန်ဒေါ်လာ အီးယူအာရ် GBP
high-ဗို့ devices များ
ထုတ်ကုန်သိုးတံဆိပ်ကပ်ကြသည်မဟုတ်လျှင်သင် 14 ရက်အတွင်းပြန်လာသို့မဟုတ်လဲလှယ်ထုတ်ကုန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းမ။ သင်သည်လူတယောက်ရက်စွဲပြီးနောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဖောက်သည်ကုန်ပစ္စည်းများပြန်လာသို့မဟုတ်လဲလှယ်ဖို့ခွင့်ရှိသည်။
1 ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်သစ်ကိုသူဖြစ်ရမည် ထိုသို့အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းမ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်စက္ကူသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်။ ဖယ်ရှားမရဖြစ်ရမည်နှင့်မျက်ရည်ပစ္စည်းများကိုမူလအထုပ်ထဲမှာဖြစ်ရပါမည်။
2 ။ အဆိုပါစတိုးဆိုင်ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အမှုကဘာမှပြောင်းလဲမငြင်းပယ်ဘုံသည်လူအချို့ကိုပြောင်းလဲပစ်သို့မဟုတ်ပြန်လာပိုင်ခွင့်များအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့စသည်တို့ကို pads, ဖိနပ်, မျက်နှာဖုံး, earplugs သကဲ့သို့, shared မဟုတ်ပါရှိသည်။
- အထူးမြှင့်တင်ရေး ကုန်ပစ္စည်းပရိုမိုးရှင်း
- ကနျြးမာရေး-related ပစ္စည်းများ shared နေကြသည်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။
3 ။ ဖောက်သည်ထုတ်ကုန်ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မလက်ခံရရှိ၏အထောက်အထားကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူသင်၏ပြေစာဆောင်ကြဉ်းပေးပါ။
4 ။ စက်ရုံသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီမှဖလှယ်သို့မဟုတ်ပြန်လာသောခံရဖို့ကုန်ပစ္စည်းများမပို့ကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကြောင့်မည်သည့်တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ပြန်ထုတ်ကုန်ပေးပို့လျှင်။
5 ။ ပြန်အမ်းငွေများသို့မဟုတ်အစားထိုးထုတ်ကုန်အဆက်အသွယ်သို့ကွှလာပြီးနောက်7ရက်အတွင်းစတိုးဆိုင်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏လိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စတွင်ဖြစ်စေ, ဖောက်သည်မှပြန်အမ်းသို့မဟုတ်အစားထိုးထုတ်ကုန်ရယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆိုင်အတည်ပြုပြီးစံလျှင်။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုအတည်ပြုပြီအီးမေးလ်, ဖုန်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ဖြည့်ဆည်းမထားဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့မကြာခင်အဖြစ်ကောင်းစွာပြန်သတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်။
1 ။ အဆိုပါစတိုးဆိုင်ဖောက်သည်မှငွေပြန်အမ်းလိမ့်မည်။ ဖောက်သည်တစ်ဦးငွေသားချေပါလျှင် ကျနော်တို့ပြန်မသွားပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖောက်သည်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ချေ။ ဒါဟာဖောက်သည်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကနေတဆင့် 14 ရက်အတွင်းအလိုအလျှောက်ပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။
2 ။ ဖောက်သည်ပြန်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံရဖို့တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေရဖို့ပါ။
အဆိုပါထုတ်ကုန်ပြန်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ သာပုံမှန်စျေးနှုန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ စတိုးဆိုင်ထုတ်ကုန်ကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ဖောက်သည်တစ်ဦးလျှင်ဝယ်ယူစျေးနှုန်းပြန်အမ်းဖို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်စေလွှတ်တော်မူခဲ့တဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်။ သငျသညျအရွယ်အစားကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ပြောင်းလဲမှုကိုကုန်ပစ္စည်း ကျနော်တို့စာရင်းသင်္ဘောဖို့ကုန်ပစ္စည်းများပြန်အမ်းသို့မဟုတ်ဖလှယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာစေလွှတ်ပြီလျှင်။ အီးမေးလ်သတိပေးချက်များသင်အားငါပေးမည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားကိုပြန်မသွားရှိသည်။
ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူမှာပစ္စုပ္ပန်သော product အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်မပါရှိဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ပြန်အမ်းသို့မဟုတ်အစားထိုးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေအပေါ်လက်ခံသူမှတစ်ဦးကအကြောင်းကြားစာ။
အဆိုပါ Pied Bueng Lam Luk Ka, Pathum Thani, ထိုင်း 42 တို့တွင် 11 /612150 ပြန်လာပါ။
ဖောက်သည်ပြန်သို့မဟုတ်အစားထိုးအရေးဆိုမှု၏ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တာဝန်ရှိကြလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တင်ပို့တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ သင်တစ်ဦးကို item ပြန်လာသို့မဟုတ်ဖလှယ်ချင်တယ်ဆိုရင်။ ကျနော်တို့ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုများအတွက်ရေကြောင်းတာဝန်ခံနုတ်မှရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါပေးပို့ရန်လိပ်စာပေါ် မူတည်. ။ ဖြန့်ဝေ၏အချိန်မေးလ်ပေါ် မူတည်. မတည်မငြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်မေးလ်များဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သောအာမခံလျော်ကြေးသေချာစေရန် EMS အားဖြင့်ဘတ်ငွေရေကြောင်း 1,000 သငျ့သညျထက်ပိုမိုကုန်ကျမယ့်ထုတ်ကုန်ရှိပါက။ သငျသညျအိမ်မှာသို့မဟုတ်ပို့ဆောင်မှု၏လိပ်စာကပို့စရာမဟုတျပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကို item ပြန်ရောက်လျှင်။ ဒါပေမယ့်လက်ခံရရှိသူအိမ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကုန်ပစ္စည်းပြန်ရောက်စေခြင်းငှါ ငါတို့သည်ဤအပိုင်းကိုအတွင်းကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တာဝန်ရှိနေကြသည်မဟုတ်။
© 2018 บริษัทเหลืองรัศมี จำกัด. ลิขสิทธิ์ โดย LRMsafety.com. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
အဘယ်အရာကိုမျှသင်၏အကိုယ်စား posted လိမ့်မည်။